Paartiin Badhaadhinaa ABO Maqaa Sirrii Hin Taaneen Waamuu fi Uummata Oromoo Maqaa Balleessuudhaaf Mirga Hin Qabu – Adda Bilisummaa Oromoo
Akkasumas filannichi ta’e jedhamee itti yaadamee, haalota nagaa fi tasgabbiin yaaddessaa ta’ee fi naannowwan walitti bu’insaan muddame keessatti gaggeeffame. Tibba filannootti Lixa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa, Kaaba Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa, naannolee Affaarii fi Ogaadenii fi lola Kaaba Itoophiyaa Adda Bilisummaa
Uummata Tigraay waliin gaggeeffamaa jiru dabalatee lola hamaatu adeemsifamaa ture. Buufataaleen filannoo loltoota paartii badhaadhinaan guutamanii waan turaniif, uummannii naannoolee lolli itti gaggeeffamuu barbaadu kana keessa jiraatu filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye. Hawaasaa fi dhaabbileen idil-addunyaa filannoo kana waan lagateef, qaamoleen walaba ta’an filannicha hin daawwanne. Waanti baay’ee nama ajaa’ibu ammoo, bakkoota hedduutti deggertoota Paartii Badhaadhinaatu akka daawwattootaatti dhiyaate. Warri filannoo kana irratti hirmaachuudhaaf carraa argatanis, loltoota Paartii Badhaadhinaatiin sodaachifamaa, miseensota Paartii Badhaadhinaa akka filaniid kallattiinis ta’e alkallattiidhaan dhiibbaan isaan irratti godhamee jira. Walumaagala, filannicha haala lolaa fi walitti bu’insaan muddamee fi garee biyya bulchaa jiruun dhuunfatame keessatti gaggeeffame. Paartiin Badhaadhina gaafa guyyaa Waxabajjii 21/2021 dorgommii tokko malee qofaa isaa filannoo gaggeessuudhaan, akka waan injifateetti labsee jira.